अ’श्लिल भि’डियो बनाउ’ने नि’यत’ले ड्रे’सिगं रुम’मा लुकाए’को क्यामेराको भि’डियो पर्दा’फास (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाज > अ’श्लिल भि’डियो बनाउ’ने नि’यत’ले ड्रे’सिगं रुम’मा लुकाए’को क्यामेराको भि’डियो पर्दा’फास (भिडियो सहित)
अ’श्लिल भि’डियो बनाउ’ने नि’यत’ले ड्रे’सिगं रुम’मा लुकाए’को क्यामेराको भि’डियो पर्दा’फास (भिडियो सहित)
admin December 4, 2020 December 4, 2020 समाज	0
भारतको राजस्थानको राजधानी जयपुरको एक कपडा पसलमा कपडा किन्न गएकी युवतीले सिसिटीभी जडान भएको थाहा पाएपछि उनले हंगामा नै मच्चाएकी छिन् ।
सुरुमा पसलेलाई केरकार गरेकी युवतीले पछि प्रहरीलाई नै उपस्थित गराएर घटनाको पर्दाफास गरेकी छिन् ।तपाईले कपडा किन्ने कपडा पसलको ड्रेसीगं रुपमा कपडा फेर्ने बानी छ ? यदि त्यस्तो बानी छ भने होशियार ! पसलेले झुक्याएर तपाईको न’ग्न भिडियो बजारसम्म पुर्याइदिन सक्छन् ।
त्यस्तै भएको छ भारतमा ।प्रहरीले छानबीनका क्रममा ड्रेसिगं रुपमा लुकाइएको क्यामेरा फेला पार्यो । प्रहरीले यो हर्कतमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । **पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला**
आफ्नै श्रीमतीको अर्कै केटासंग मोजमस्ती, मोबाइलमा भेटिए यस्ता तस्बिर (भिडियो)
कोपुको कारणले मरेको भन्दै कक्षा २ मा पढ्ने बालकको सुसाइड नोट!
महिला प्रहरीले लेखिन् गायिका आस्था राउतलाई यस्ताे हृदयविदारक चिट्ठी ! आँखाबाट आशुँकाे भेल बग्नेछ
१५ वर्षमै जबरजस्ती गरि बच्चा पाउने गराएर प्रेमी भागेपछि, अश्लिल भिडियो देखाएर जबरजस्ती गर्थे… भिडियो हेर्नुस्